IGEM ELIFIHLEKILEYO ENJONGWE YIINTABA - I-Airbnb
IGEM ELIFIHLEKILEYO ENJONGWE YIINTABA
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMichell
Indlu ehonjiswe ngokumnandi ekwiattic enembonakalo entle yeentaba zeCantabrian. Igumbi lokulala eli-2 elinye linebhedi enkulu yokumkanikazi kunye negumbi lokulala lesibini elineebhedi ezi-2 ezingatshatanga. Igumbi lokulala ngalinye linebalcony enemibono entle. Iparadesi yabathandi bendalo!
IRamales de la Victoria ibekwe ngokulula kwimizuzu engama-45 ukusuka eSantander, imizuzu engama-50 ukusuka eBilbao kunye nemizuzu engama-20 kude nolwandle lwaseLaredo. Ukuba ungathanda ukuya kumyezo wezilwanyana, iCabarceno Natural Park ikumgama wemizuzu engama-40. Ukuba yimyuziyam entle yaseGuggenheim, yimizuzu engama-50. Imizuzu emi-5 kude nemiqolomba edumileyo yeCovalana imi ebonisa ubugcisa bePalaeolithic obuneminyaka eyi-19,000. Ukuba unqwenela igalufa, ibala legalufa laseMataleñas likumizuzu engama-45 kude. Ukuba awufuni kuqhuba naphi na, unokuhamba ngeendlela ezininzi eRamales kwaye ubone iNenekazi lethu laseGuardamino elakhiwa phakathi kwenkulungwane ye-14 ukuya kweye-16.
I-Spelunking (i-potholing), i-Mountain biking, ukuhamba ngebhayisekile ezindleleni, ukukhwela intaba. kunye nokunyuka kwamatye nako kuthandwa kakhulu kwindawo.
Sinikezela ngeFiber Optic WIFI yasimahla ukuze uyisebenzise.
Ifakwe kwindawo entle kufutshane neekhefi ezinencasa kunye neebhari ezifana neCafe Casa Quintela, iBar Vittorin, kunye neWilly's. (Ezona zingcono kwiiwayini zasekhaya kunye neGintonics.)
Umbuki zindwendwe ngu- Michell